Gujarat Tribal Tour | Dana + 91-993.702-7574 yekubatsira.
Chizvarwa cheGujarat chakakura chaizvo, uye vanhu vemadzinza eGujarat vane nyanzvi uye vane unyanzvi. Zviuru zvevashanyi vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanosarudza Gujarat Tribal Tour pakari, umo vanowana kufara uye kufara kwekuenderera mberi nekutambira. Kunze kwezvivako zvekare, mawere uye maitiro emitemo, nyika yeGujarat inozivikanwa nokuda kwehupenyu hwemarudzi. Gujarat ine mazana emapoka emarudzi anogara pano kwemazana emakore anozivikanwa sevagari vekare. Iwe uchasvika pakuona nyika itsva ye tsika ne Sand Sand Pebbles 'Gujarat Tribal Tour pakari. Misha Inotengeswa (misika) yeKhhotaudepur, Kanwat kana Rangpur kana Sajadi ndiyo nzvimbo yakakwana yekupupurira Rathwas, Nayakas uye Bhil mumidziyo yavo yakaisvonaka. Gujarat Tribal Tour inokupa mukana wakakwana kune vatashanyi kuti vaone marudzi akasiyana-siyana emarudzi, mararamiro avo, mavara mavara, tsika uye tsika. Pedyo nePoshina musha, pane nzvimbo apo munhu anogona kuona zviuru zvemabhiza etirasiti akapihwa kune vamwari vemadzinza, iyo yakasiyana zvikuru muIndia. Mune dzimwe misha yakapoteredza Poshina, tinoona Garasia dzinza reGujarat neRasasthan. Gujarat Tribal Tour inotsvaga neok nekona yenzvimbo dzisingatarisirwi apo vanhu vemarudzi vanogara.
Chiitiko cheGujarat Tribal Tour ndiyo nzvimbo ine simba yekutch. Pano, nyika inofadza zvikuru Rabaris, ivo vafudzi vemombe uye nguva dzose pavanenge vachidaidzwa saizvozvo seGypsies. Vakadzi veRabha vanopfeka mabhanhire madema uye benzi risingaverengeki asi varume vacho vanopfeka jira chena nehombodo yakanaka. Bhuku rako Tribal Culture Tour muGujarat zvino, neSandle Pebbles Tour uye Travel.
Mutambo Wokushanyira: 230
ZUVA 01: AHMEDABAD
Paanosvika kuAymedabad yendege kuenda kune hotele uye kuongorora. Endai mushanyi wemasvingo uye Shreyas folk museum. Zororo rezuva rakasununguka pakuzorora. Usiku huno huri pahotera.
ZUVA 02: AHMEDABAD - CHHOTTAUDEPUR (250 KM / 05 HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwaKuttaudepur, shanyira munharaunda yemasvingo nemataundi emadzinza akapoteredza guta racho. Inofungidzirwa seimwe yemabhanhire emarudzi ekutanga eGujarat. Usiku huno huripo kuChhottaudepur.
ZUVA 03: CHHOTTAUDEPUR - UTELIA (150 KM / 03 HRS)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani uende kuUtelia. Pakuuya kushanyira Bharwad vemadzinza emarudzi. Mhuri dzeBharwad, vanhu vefundisi vemunharaunda yacho. Ivo ndevashandi vanofudzi nekutora. Paurwendo rwako, shanyira vanhu ava vane mavara akasiyana-siyana vachifamba-famba mumigwagwa yakanaka uye zvichida misha midzimba shomanana kuwana ruzivo rwehupenyu hwemarudzi zuva nezuva. Tora matanho anotendesa zvishoma zviduku zvinotaridzika zvinotarisa mazamu mumatombo anoonekera muKamera yako. Usiku huno huripo kuUtelia.
ZUVA 04: UTELIA - BALARAM (140 KMS / 03 HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaBharamu Paunosvika chengetera muhotera / nzvimbo. Zuva rose rinonakidzwa nezvivako zvekuvakira. Usiku ona mutambo wemadzinza paimba yacho. Usiku huno huripo paBharamu.
ZUVA 05: BALARAM LOCAL TRIBAL VILLAGES
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemazuva emunharaunda mushanyira mamoka emunharaunda ayo ari kumativi ezvikomo makomo Gujarat uye Rajasthan, GGowallaand Garcia ndivo vanonyanya kufudza makwai, vanozivikanwa netsika dzavo dzakasiyana uye tsika. Iyo Gora uye Garcia madzinza ndiwo mazukuru echipiri kune mumwe nemumwe, akasiyana chete nenzira yekurarama. Kunyange zvazvo Gowala yakanyatsogadziriswa, Garcia vachiri vanyengeri, uye vakadzi vavo vanopfeka nenzira isinganyanyi kunakidza kupfuura vakadzi veGowala. Usiku huno huripo paBharamu.
ZUVA 06: BALARAM - PATAN - LITTLE RAN KOKUTCHWA (100 KM / 02 HRS)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani munofanira kuenda kuPatan Uyai kuPatan uye mushanyire imwe yemhuri yevaPatola vanocheka, vanozivikanwa pamifananidzo yavo yakasiyana yePatola. Ichokwadi kuti imwechete Patola sari inogona kutora mwedzi mitanhatu yekupedzisa, inoratidza kuti zvakaoma uye zvinoda kuve Patola Art. Uyewo, shanyira 11th Century yakakurumbira Rani-ki-va (danho rakanaka). Ramba uchityaira kuenda kuRittle Rann wekutch. Usiku huno huri kugara kumakamuri.
ZUVA 07: LITTLE RANN WEKUTCH
Mushure memangwanani ekushanya kushanyira Rabari neBanjara. Ndiwo madzinza maviri anokosha enyika. Kunyange zvazvo Rabari, iyo yakatama-tama kune mamwe madzinza eGujarat, inogara ichienda kune imwe nzvimbo yekutsvaga nzvimbo yakanaka yekuchera makamera nemakwai avo. Banjara nedzimwe madzinza zvakagara pano. Uyewo unoshanyira kumba kune pangozi yeAsiaan Wild Ass, nzvimbo yacho inozivikaniswa nemhuka dzakasiyana dzesango uye shiri. Usiku huno huri kugara kumakamuri.
ZUVA 08: LITTLE RANN WEKUTCH - AHMEDABAD (95 KM / 02 HRS)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani uende kuna Ahmedabad. Svika paAimmedabad uye uende kuenderera mberi kuenda kune imwe nzvimbo.